GMDQ OO SII WADA KORMEERKII XISBIYADA SIYAASADDA – GMDQ
GMDQ OO SII WADA KORMEERKII XISBIYADA SIYAASADDA
Taariikhda markey aheyd 09/01/2019 Guddiga Madaxbannaan ee Doorashooyinka Qaranka waxay kormeerkii xisbiyada oo ay soo wadeen ku tageen xafiisyada afar xisbi siyaasadeed ee dhawaan la gudoon siiyey shahaadaha kumeelgaarka ah.
Xisbiyada la kormeerey ayaa kala ahaa, xisbiga ILAYS, xisbiga JIINKA IYO XEEBAHA, xisbiga CADAALADDA IYO HORUMARKA iyo xisbiga MIDOWGA NABADA IYO HORUMARKA.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxbannaan Ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismacil Ibrahim iyo xubnaha Guddiga ayaa soo wada kormeerey xafiisyada xisbiyada sida kumeelgaarka ah loo diiwaangeliyey.
Kormeerka ayaa yimid ka dib markii xisbiyada ay qaateen shahaadada KMG ah lana doonaayo in xisbi walbo uu ku guuleysto nidaamka buuxinta sharuudaha xisbi dhameystiran si loo gudoon siiyo shahaadada rasmiga ah. Diiwaangeliya xafiiska xisbiyada Maxamed Maxamud Xasan ( Sandheere) wuxuu xisbi walbo weydiiyey suaalo ku saabsan hab dhaqanka xisbiyada, xeerka shaqaalaha, hab raaca saraakiisha la magacaabey, qorsho howleedkooda iyo guud ahaan macluumaadka ku saabsan habka dhaqanka u dhaxeeya xisbiga iyo shacabka.
Guud ahaan xisbiyada la kormeerey waxay isaga mid ahaayeen soo jeedinta codsiyo la xariira in laga daboolo tababaro si ay u noqdaan xisbi ka soo dhalaala waajibaadkooda shaqo.
Ugu dambeyn Gudoomiyaha GMDQ Xaliimo yareey ayaa kula dardaaran tahay xisbiyada sidii ay dalka ugu horseedi lahaayeen nidaamka xisbiyada badan, taasoo suuragelin karta in shaqsi walbo oo muwaadin Somali ah uu codkooda siisan karaan qofkey doonaan.
Guddiga waxay sii wadi doonaan kormeerida xafiisyada xisbiyada ee qaatey shahaadada kumeelgaarka ah ee xisbinnimo
Waxaa la faafiyey January 10, 2019 January 10, 2019